"(Hoy Jesosy) Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra." Matio 10:30, 31
"Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho ; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao." Isaia 41:10
Teo anilan'ny tranon'ireto mpivady mpino efa antitra, dia nisy hazo lehibe naniry, nambolena teo efa ela. Loaka anefa ny vatany ka natahorana ny hianjerany raha misy rivotra mahery, hany ka dia velon-tebiteby izy mivady. Ilay hazo moa dia teo amoron'ny arabe, akaiky ny tariby mitondra herinaratra, akaiky ireo trano fonenana, akaiky ny fefy, noho izany dia toa tsy azo noheverina ny hanapaka azy ka tsy hisy fahapotehan-javatra. Tsy hitan'izy ireo izay hatao.
Indray alina dia nisy zavatra nitriatra, feon-javatra nidaboka mafy... ary indro ilay hazo fa nidaboka teo amin'ny toerana izay hany tsy niteraka fahasimbana. Afaka ny tebitebin'izy mivady! Tsy misy na inona na inona atahorana intsony. Ny tanan'Andriamanitra no nitantana ny zavatra rehetra.
Andriamanitra dia miandraikitra izay rehetra mikasika antsika, anisan'izany izay heverintsika ho antsipiriany indrindra eo amin'ny fiainantsika. Na dia ny volon-dohantsika aza dia voaisany. Fiahiana mahagaga izany, ho an'ireo izay mitoky aminy!
Tsy misy tsy hitany: fantany avokoa izay rehetra ataontsika (Salamo 139:3).
Tsy misy fetra ny heriny: "Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao" (Joba 42:2).
Aoka àry isika tsy hisalasala hanambara aminy izay manahirana antsika. Mihaino Izy, ary mamaly am-pahendrena.
"Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra" (Filipiana 4:6).